Chii chinonzi HTML Text Extractor? - Semalt Review
. Nechirongwa ichi, unogona kuparadzanisa magwaro e HTML uye kuwana ruzivo rwakakosha munyaya yemasekondi. Kana iwe uchinetseka nokuti nzvimbo inenge isina kusarudzwa uye kutsvaga sarudzo yakarurama, shanduro ye HTML yekusarudza ndiyo yakasarudza iwe.
Dhigiridha ye HTML yakagadzikana zvakawanda. Zvimwe zvacho zvakakurukurwa pasi apa.
1 - pirelli p zero nero 245 40r18. Inokodzera vanoronga
Kune vadzidzisi uye vasina-programmeri, extractor ye HTML inobvisa zvinyorwa uye zvinyorwa kubva pamapeji emudiro adikanwa. Iwe haufaniri kuva neunyanzvi hwekugadzirira kushandisa shandura iyi. Pane kudaro, unoda zivo inokosha ye HTML nePython kuitira kuti basa rako riite. Ichi chishandiso hachisi chakanaka chete kune vanoronga mapurogiramu asiwo kune mabhizinesi, kutanga, vatapi venhau, uye vadzidzi.
2. HTML text extractor for web designer
A web designer ane mutoro wekusika mazano makuru uye mapeji ewebhu ekugadzira vatengi vake. Kana iwe uri unyanzvi webhutani web designer uye une nhamba yakawanda yefaira re HTML kuti ubudise, unofanira kuedza yekanyorwa ye HTML HTML. Ichi chishandiso chinovimbisa kuchengetedza kwako uye kuvanzika paIndaneti, kukuwana iwe zvakanyatsotsvaga deta. Uyezve, inounganidza uye inotora mashoko kubva mumifananidzo nemavhidhiyo, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti uite zvigadzirwa zvekufananidzira.
3. HTML text extractor for all operating system
Chimwe chezvinhu zvakasiyana-siyana zvinowanikwa muhurukuro ye HTML ndeyokuti inoshandisa pane zvose maWindows systems. Uyezve, chigadziri ichi chinogona kubatanidzwa chero upi zvake web browser uye chakakosha kune vanoshandisa Windows 98, Me, 2000, NT, Vista, XP, uye 8. Icho chichaputsa faira yako uye ichabvisa magwaro nenzira yakaverengwa.
4. Inogadzira uye inogadzirisa vashandi uye zvinyorwa
Nechirangaridzo chemashoko e HTML, webmasters anogona kugadzira nekugadzirisa zvose zvinyorwa uye vashandi nyore nyore. Iyo inobvunza maitiro ekugadzirisa mashoma nyore uye inoita mabasa akasiyana-siyana evashandisi vayo.
5. Iwe unogona kushandura dhesi risina kugadziridzwa mumashoko anogona kushandiswa
Nekanyorwa ye HTML, iwe unogona kushandura dhesi risina kusimbwa kuti ishandiswe uye inonzwisiswa mashoko zvakanaka. Iwe haudi chero unyanzvi hwekugadzirira kushandisa shandura iyi. Inotanga kuongorora ma HTML mapepa uye ichapa 40 zvigadzirisiti zvemazuva ekusarudza kubva, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kutumira data yako.
6. Zvakanaka kune webhusaiti dzemashoko
New-York Times, CNN, BBC uye Washington Post mune dzimwe nzvimbo dzinonyanya kuzivikanwa nenyaya. Nehurukuro ye text HTML, unogona kubvisa deta kubva kune idzi masayiti nyore nyore. Ichakupa zvibereko zvakanaka uye inogadzirisa zvikanganiso zvose zvikuru uye zviduku nyore nyore. Nechirongwa ichi, unogona kuumba huwandu hwehutano uye huchabudiswa pane webhusaiti yako kuitira zviri nani kutsvaga injini rankings.
7. Zvigadziriswa zvekubhadhara zvirongwa
Pakupedzisira asi kwete, zvinyorwa zvinyorwa zve HTML zvinokodzera kutanga uye zvinouya nezvirongwa zvakasiyana. Semuenzaniso, unogona kusarudza chirongwa chayo chekutanga kana iwe uine bhuku rega rega uye haugoni kutenga mari yekutengesa. Chirongwa chekutanga chinokubhadhara $ 20 pamwedzi uye unosunungura mitoro yezvinhu uye zvasarudzo kwauri. Zvisinei, kutongwa kwaro kwemazuva 14 kunowanikwawo.